Taiwan: Potiky ny rivodoza Morakot ny faritra atsimon’i Taiwan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2009 20:12 GMT
Nandalo tany Taiwan ny rivo-doza Morakot ny 07 aogositra 2009 lasa teo. Nampirisika ny mponina tany amin'ny faritra avaratra hiomana amin'ny fiavian'ny orambe sy ny rivotra mahery ny biraon'ny famantarana ny toetr'andro tany an-toerana. Kanjo ny faritra atsimo no nitondra faisana tamin'ny tondra-drano sy ny fahasimban'ny fambolena raha nampitahaina tamin'ny faritra avaratra, indrindra tamin'ny namelezan'ny Morakot ity nosy ity ny 08 aogositra tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro.
Nihoatra noho ny rotsaka isan'andro ny oram-be tany Chiayi, Tainan, Kaohsinung ary tany Taitung izay vokatry ny toetr'andro ratsy tokoa. Ny faritry Pingtung no tena voa mafy indrindra satria ny rotsak'orana tany an-toerana nandritra ny 24 ora dia nahatratra1.403mm. Tafakatra hatramin'ny 2.500mm izany rotsak'orana izany tao anatin'ny 3 andro, ary io fatra io dia mitovy amin'ny rotsak'orana mandritra ny herintaona!
Difotry ny rano ny 2/3 n'i Pingtung. Any Linbian, Fangiliao ary Kanding dia tranobe maro no difotry ny rano ary voatery mipetraka eny an-tafontrano ny olona miandry fanampiana. Tany Chiandung kosa dia voatery nafindra toerana ny mponina rehetra.
Araka ny notaterina tao amin'ny vaovao tamin'ny 22:00 ny 10 aogositra lasa teo dia nahafatesana olona 23 ny tondra-drano ary 56 no tsy hita popoka. Maherin'ny 30 000 kosa ny olona tsy afaka mihetsika fa voadidin'ny rano.
Sary nalain'i Liu.
Mampahatsiahy ny “tondra-drano tamin'ny 87 ” tamin'ny taona 1959 ity rivo-doza ity(misy resaka taona sinoa angamba ao: naotin'ny mpanao fanitsiana) , rivo-doza izay namotika tanàna 13. nahatratra 11%n'ny harin-karena tany Taiwan no potika tamin'izany.
Lalam-by tapaka tany Taimali, Taitung
Sary nalain'i CNA(notsongaina tao amin'ny UDN)
Manoloana ny fahasimban-javatra nateraky ny rivo-doza dia nanapa-kevitra handray andraikitra ireo mponina sy ireo mpitoraka bilaogy.
Manangona sy manaparitaka vaovao eran'i Taiwan i Billypan sy ireo mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny plurk ka nametraka ny Google Map hanamarihany ireo faritra voakasiky ny loza.
Milaza ao amin'ny Plurk i Billypan:
“Arakaraky ny fanampiana sarintany ao amin'ireo sarintany voakasiky ny loza no hahatsapako fa mihasarotra ny toe-draharaha any Changhwa sy Taichung. Tsara fiomanana kosa ny mponina tao afovoan'i Taiwan.”
Namorona vohikala ihany koa i XDite , “Supporting for the victims of Morakot Typhoon“ (fanampiana ireo niharan-doza tamin'ny rivo-doza Morakot), ka miantso ny rehetra hifanampy sy hifanome tanana.
Hafatra tao amin'nyTwitter sy plurk nataon'ny GENE sy ny landslides map nataon'i Schee no nananganana ny Morakot Disaster Intelligence Center, fikambanana hafa najoron'nyADCT, fikambanana mpamonjy voina tsy ara-barotra (tsy maka tombony) sady mahampikambana ahy rahateo. Indro ny rohy hidirana ao amin'ny vohikala.
Afisy kely tondra-drano ao Taiwan: “Momba an'i Taiwan i Andriamanitra”(天佑台灣)
Mizara vaovao maro mikasika ity loza ity koa i Ivan mpitoraka bilaogy. Miantso ny mponina rehetra handefa rano amin'ny tavoahangy ho any amin'ireo faritra voa mafy izy. Manoro hevitra ny solotenam-panjakana Yuan amin'ny tokony hianatra amin'ny Web 2.0 momba ny asa famonjena voina ataony koa i Vincent Chang.
Nahitan'i Lezomà hevitra ny nataon'i Billypan sy Xdite mikasika ny tondra-drano, mijery ny fomba hanomezana endrika indray ny tanàna amin'ny fampiasana ny teknolojia nomerika. Mpanao gazety sy mpitoraka bilaogy antsoina hoe Chyng no nanoratra ao amin'ny fanadihadihana nataony mikasika ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro any amin'ity nosy tropikaly ity. Nofaranany tamin'ny tenin'ilay mpandala ny tontolo iainana Liao Ben-Chuan ny fanadihadihany:
Navoitran'i Liao Ben-Chuan fa manoloana ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny ankapobeny, dia hihamahery hatrany ny orana arahana tafiotra; milaza koa ny vokatry ny fikarohana fa izany oram-batravatra izany dia hiteraka voka-dratsy ho an'ny nosy maro. Raha tsy manana paik'ady mazava hiadiana amin'izany mandritra ny fotoana maharitra ny governemanta dia ho maizina ny ho avin'i Taiwan.